''Dhirta oo la ogaaday in calaaqaad uu ka dhaxeeyo'' - BBC News Somali
''Dhirta oo la ogaaday in calaaqaad uu ka dhaxeeyo''
Daraasad ayaa muujineeysa in dhulka hoose ee keeymaha ay ka jirto shabakad isku xireysa xididada iyo Fangaska taas oo geedaha iyo dhirta ka caawisa in midba mid kale uu xiriir la sameeyo oo calaaqaad yeeshaan.
Shabakadaan dhulka hoostiisa ka sameeysan ayaa waxa ay jirtaa ku dhawaad 500 oo milyan oo sano.
Haataan daraasad caalami ah ayaa soo saartay khariiraddii ugu horeeysay oo caalami ah, taas oo muujinaysa sida shabakadda Fangaska iyo dhirta ay uga shaqeeyso dhulka hoostiisa.
Cilmi baarayaal ka socda shirkadda sheeybaarka ee Crowthe, kuwaasi oo ka kala socday jaamacadaha ETH Zurich,Switzerland, iyo Stanford ayaa isticmaalay xogta ay soo saartay mu'sasadda kaymaha ee caalmaka taas oo baartay 1.2 milyan dhir kala duwan ah kuwaasi oo ku kala yaalla in ka badan 70 dal.
Bare sare Thomas Crowther, oo ka mid ah qoraayaasha warbixnta, ayaa BBC-da u sheegay in ay tahay markii ugu horaysay oo ay u suuro gasho in ay fahmaan wax ka socda dunida naga hooseeysa.
Maxay isku raaci doonaan madaxda afka ka dirirsan ee shirka G7?
"Wiilkaygii gaajo ayuu u dhintay"
Cilmi baarista ayaa sheegeeysa sida ay shabakaddan dhulka hoose ka jirta muhiim ugu tahay isbedelka cimilada ee u dhexeeysa dhirta iyo Fangaska iyo sida ay ugu jilicsanyihiin saameeynta ka dhalata isbedelka cimilada.
Baabi'inta shabakadda Fangaska ee keeymaha ayaa waxa ay kordhin kartaa heerkulka uu sababo isbedelka cimilada iyo Kaarboonka.
Fangaska nooca Mycorrhizal ayaa ah mid xiriir wanaagsan la leh dhirta.
Fangaskan ayaa isku weegeera xididdada geedaha isagoon saameyn shaqada xididka.
Natiijada daraasadaan ayaa haatan bilow u noqon doonta dadaallada dib loogu soo celinayo dhirta ee ay waddo Qaramada Midoobay, kuwaasi oo ay ku baxayso lacag dhan tirilyan doolar.